[ Sep 15, 2017 ] दशैंमा कुन गाडी किन्दा कति छुट, के-के उपहार ?
काठमाडौं । दशैंको अवसरमा गाडी शो-रुममा सवारी हेर्ने, छान्ने र बुकिङ गर्ने क्रम तीव्र छ । दशैंको अवसरमा सबै गाडीका उत्पादक तथा वितरकहरुले विशेष योजना ल्याएका हुन्छन् । दशैं-तिहारका अवसरमा नयाँ सवारी किन्ने योजनामा रहेकाहरुलाई यो…
[ Sep 14, 2017 ] दशैंमा सिजीका टिभी किन्ने हो? यस्तो छ मूल्य र हात खाली नजाने अफर
दशैंमा धेरैको नयाँ टिभी खरिद गर्ने योजना रहेको हुन्छ। यसै अवसरमा विभिन्न कम्पनीले चाडपर्व लक्षित अफर सार्वजनिक गरेका छन्। तर, सार्वजनिक गरिएका ब्राण्डका अफर मूल्य पनि धेरैलाई महँगो लाग्न सक्छ। यस्तोमा कम मूल्यमा तपाईँले गुणस्तरीय टिभी…
[ Sep 12, 2017 ] आज सार्वजनिक हुँदैछ आइफोन एट, यी हुनसक्छन् फिचर्स
[ Sep 03, 2017 ] प्रेसिडेन्ट ग्रुपको नयाँ रेष्टुरेन्ट रविभवनबाट
काठमाडौँ । राजधानीको काठमाडौँ रविभवन लामपार्टीमा नयाँ रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउने भएको छ । होटल व्यवसायमा फरक पहिचान दिन सफल प्रेसिडेन्ट ग्रुप अफ होटलको लगानीमा सातौँ आउटलेटका रुपमा प्रेसिडेन्ट रेन्टुरेन्ट एण्ड सेकुवा रविभवन सञ्चालनमा आउन लागेको हो । …
[ Sep 01, 2017 ] सेप्टेम्बर १२ मा आइफोन-एट
लामो पर्खाइ तथा अनेकन अड्कलबाजीपछि आखिर बहुप्रतीक्षित आइफोन-एट सार्वजनिक हुने मिति तय भएको छ । एप्पलको यो अत्याधुनिक आइफोन आगामी सेप्टेम्बर १२ का दिन लञ्च हुनेछ । यसअघि पाटपुर्जा उत्पादनमा ढिलाई भएका कारण आइफोन-एट सेप्टेम्बरमा आउन नसक्ने र वर्षको…
[ Aug 30, 2017 ] नाडा अटो शो : १५ लाखदेखि ४ करोडसम्मका गाडी
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारवाट सुरु भएको सवारीको कुम्भ मेला भनेर चिनिने नाडा अटो शोमा दुई पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे सावरीको अवलोकन गर्नेको भीड लागेको छ । धेरैले विभिन्न कम्पनीले नाडा अटो शो लक्षित गरी सार्वजनिक गरेका सावरी साधन…
[ Aug 29, 2017 ] गाडीहरुको कुम्भ मेला ‘नाडा अटो शो’ राजधानीमा सुरु
[ Aug 28, 2017 ] गाडी किन्दै हुनुन्छ ? जान्नुस् कुन बैंकले कति ब्याजदरमा ऋण दिन्छन्
काठमाडौं । गत वर्ष नाडा अटो शोमा ६ प्रतिशतसम्म व्याज दरमा सवारी कर्जा पाएका ग्राहकहरुले यसवर्ष भने केही बढि व्याजदर तिर्न पर्ने देखिएको छ । साउन र भदौंमा वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशित गरेका व्याजदरलाई आधार मान्ने हो भने यसपटक ग्राहकले न्युनत्तम १०…
[ Aug 25, 2017 ] हुन्डाईका गाडीमा ५ लाखसमम छुट
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि., हुन्डाई अटोमोवाइल्स नेपालको आधिकारीक विक्रेताले हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट योजना ग्राहकहरु माझ ल्याएको छ। यो योजनाको अवधि भाद« ८ गतेदेखि कार्तिक २६ गतेसम्म रहनेछ। नेपालीहरुका दुई ठूला चाड दशैं र…
[ Aug 23, 2017 ] डुअल कलर टोनसहित सुजुकीको ‘इग्निस’ अब नेपालमा
काठमाडौं । सुजुकीको नयाँ जापानिज कम्प्याक्ट एसयुभी ‘इग्निस’ नेपाल आउने भएको छ । यो वर्षको नाडा अटो-शोमा मारुती-सुजुकीको इग्निस नेपाली बजारमा आउने भएको हो । भारतीय बजारमा लोकप्रिय रहेको इग्निस अब नेपाली उपभोक्ताले पनि चढ्न पाउने…
[ Aug 20, 2017 ] भदौ दोस्रो साताबाट १२ औं नाडा अटो शो हुने
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल एवं ग्लोवल एक्सपोजिसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसको संयुक्त आयोजनामा भदौ १३ गतेवाट राजधानीमा १२ औं नाडा अटो शो हुने भएको छ । सवारी साधानको प्रदर्शनीका साथै नयाँ प्रविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि,…
[ Aug 11, 2017 ] श्री एयरलाइन्सले थाल्योे उडान, सुरुवातमै रोज्यो ५ गन्तब्य
काठमाडौं । ४ महिनाको अड्चनपछि उडान अनुमति (एओसी) पाएको श्री एयरलाइन्सले शुक्रबारदेखि नियमित उडान थालेको छ । उडानको पहिलो दिन यसले देशका तीन स्थानमा उडान भर्‍यो । श्री एयरलाइन्सका बजार प्रबन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार शुक्रबार एयरलाइन्सले…
[ Aug 11, 2017 ] स्पार्ककार सेवाः हटलाइनबाट चौबिसै घण्टा गाडी र ड्राइभर भाडामा
काठमाडौं । काठमाडौंमा अत्यावश्यक पर्दा गाडी भाडामा लिन मुस्किल र झन्झटिलो छ । तर अब यस्तो सेवा सुरु भएको छ, जसले हरेक किसिमका गाडी भाडामा लिँदा झन्झट त हुँदैन नै, सुन्तुष्टी भने मिल्नेछ । गाडी भाडा…